किन ट्रेन ट्रिपिंग भन्दा रोड ट्रिपिंग राम्रो छ | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 07/06/2020)
एक परिवारको लागि एक छुट्टी योजना बनाउँदा, दम्पती वा मित्र को समूह, यसलाई सहमत सबैलाई प्राप्त गर्न अक्सर गाह्रो छ. एउटा कुरा यसमा सहमत गर्न सजिलो हुनेछ, यद्यपि, एक कार भाडामा वा रेल जान चाहे छ. रेल ट्रिपिंग किन सडक ट्रिपिंग भन्दा राम्रो छ यहाँ.
जब एक सडक यात्रा लिइरहेको, कसैले सधैं चालक हुन छ. कम्तिमा एउटा व्यक्ति थकित गन्तव्य प्रत्येक खुट्टा मा आइपुग्दा छ मतलब. नेभिगेसन को तनाव र हराएको रही को संभावना थप्न, र तपाईं हुनेछु तपाईंको रेल टिकट बुकिंग कुनै दिन अब, रेल ट्रिपिंग किन यात्रा गर्न बाटो छ त पढ्न.
सडक यात्रा यसको उच्च कार्बन उत्सर्जन लागि कुख्यात छ, र ब्याट्री संचालित कार कठिन र लेना महंगा छन्. सौभाग्य देखि – त्यहाँ एक राम्रो तरिका हो. रेल ट्रिपिंग – विशेष गरी मा नयाँ रेल – एक धेरै छ आमा पृथ्वीमा कम प्रभाव, त्यसैले तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं आफ्नो छुट्टी दोषी-मुक्त.
तपाईंको ट्रेन ट्रिपिंग साहसिक बुक गर्न तयार? भ्रमण गर्नुहोस् एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् र सस्ता रेल टिकट प्राप्त.
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-train-tripping-is-better-than-road-tripping%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
लामो रेल यात्रा	सडक यात्रा	रेल यात्रा